TOP 50: Kontonkii Xiddig Ee Ugu Fiicnaa Taariikhda Manchester United - Axadle Wararka Maanta
Xiddigihii ugu wanaagsanaa taariikhda kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lasoo bandhigay, waxaana qiimayn cusub oo laga sameeyey kaalinta koowaad loogu go’aamiyey halyeygii reer Wales ee Ryan Giggs.
Charly Musonda joins AWOL after agreeing with Zulte Waregem
England’s Lions – EC 2022
Red Devils waxay ka mid tahay kooxaha ugu guulaha badan taariikhda kubadda cagta Ingiriiska, waxaanay is-ceshadaan Liverpool marka laga eego dhinaca horyaalka Premier League iyo koobabka ay ku guuleysteen, laakiin taariikhdeeda dahabka ah waxay lasoo bilaabatay jiilkii ‘Class of 92’.
50kii xiddig ee ugu wanaagsanaa taariikhda United, waxa kaalinta koowaad loo doortay Ryan Giggs oo sannadkii 1991kii u saftay kulankiisii ugu horreeyey, una ciyaray muddo 23 sannadood ah, isagoo ah ciyaartoyga ugu safashada badan taariikhda kooxda, isagoo ciyaaray 963 ciyaarood.
Waxa uu Giggs ku jiray jiilkii dahabiga ahaa ee Gary Neville, David Beckham iyo Paul Scholes, hase yeeshee waxa kale oo 50kan xiddig kula jira halyeeyadii Ingiriiska ee George Best iyo Bobby Charlson, halka Denis Law iyo Paul Scholes ay iyaguna boosaskooda cidhiidhsadeen.
Kooxda hadda ee Manchester United, hal ciyaartoy oo kaliya ayaa kaga jira liiskan waana goolhayaha reer Spain ee David de Gea oo 14aad fadhiya.
Halkan kaga bogo 50kii xiddig ee ugu fiicnaa taariikhda Manchester United: